Burco: Daladda Unita Oo Qalab Ugu Deeqday Urur Ay Ku Bahoobeen Naafadda Gobolka Togdheer | Somaliland.Org
July 30, 2012	a href=”http://www.somaliland.org/images/b/2012/07/deeq.jpg”>Burco(Somaliland.Org)-Dalladda samofalka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano Unita ayaa qalab xafiis oo ay Combuyuutaro ka mid yihiin ugu deeqday maanta ururka ay ku bahoobeen Naafadda gobolka Togdheer ee lagu magacaabo THO.
Munaasibad ururkan lagu gudoonsiinaayay qalabkan oo ay goob-joog ka ahaayeen masuuliyiin sar sare oo ka socday Wasaaradda Caafimaadka Somaliland ,xildhibaano ,aqoonyahano qaar ka mid ah saraakiisha ururda samofalka ee gobolka Togdheer iyo ururka Naafadda gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay xarunta Unita ee magaalada Burco.
" Waxaanu Unita'ahaan maanta halkan qalab kala gadisan oo xafiis ku siinaynaa ururka naafadda Togdheer oo ay ku midoobeen ,sidaa darteed urur ahaan waxa naga go'an in aanu taageero buuxda isla garabtaagno ururka ay ku bahoobeen dadka laxaadkoodu aanu dhamayn ee reer Burco ,ururda kale-na waxaanu leenahay ku dayda Unita " Sidaasi waxa tidhi Marwo Saynab Yuusuf Cabdi Guddoomiyaha Unita ee gobolka Togdheer oo sharaxaad ka bixinaysay qalabkan deeqda ah ee ay bixiyeen.
Sidoo kale waxay Saynab sheegtay ururkoodu in uu laba xubnood u tababari-doono ururkan naafada gaar'aan maamulka qaybta xafiisyada .
Guddoomiyaha ururka naafadda gobolka Togdheer (THO) Baashe C\_laahi Golos oo isna munasibadaasi hadalo kooban ka jeediyay ayaa si mig leh usoo dhaweeyay ugana mahadceliyay qalabkan ay xafiiskooda Burco ugu deeqday Daladda wadaniga ah ee Unita waxaanu ka dhawaajiyay oo uu sheegay daladani in ay tahay tii u horesay ee qalab xafiis soo gaadhsiisa .
" Unita waa daladdii u horeysay ee xfiiska naafadda qalab ku caawisa waanu ku hambalyaynaynaa " kalmadahaasi waxay ka mid ahaayeen kuwii Guddoomiyaha naafadda Burco.
Dr Cabdiraxmaan Xirsi Heeliyo oo ah agaasimaha waaxda adeega Wasaaradda Caafimaadka oo isna madashaasi ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay mashaakilaadka ku xeeran dadka aanu dhamayn laxaadkoodu ,waxaanu ururadda usoo jeediyay in ay xil adag iska saaraan taakulaynta ururda curyaamiinta Somaliland .
Waxaanu Dr soo dhaweeyay deeqdan ay Unita ugu deeqday ururkan oo uu sheegay in ay wax weyn ka tari-doonto.
Waxa kale oo iyna Xafladaasi ka hadlay Hinda Maxamed Jaamac oo ah musharax u tartamaysa golaha deegaanka Burco iyo Muuse Cale kuwaasi oo dhamaantood ku dhiirigaliyay ururka naafadda gobolka in ay dhinacooda xil iska saaraan sidii ay uga qaybqaadan lahaayeen horumarinta gobolka iyo arimaha bulshadda .
Previous PostBadhasaabka Saaxil oo Sheegay Roobab Abaartii ka Jabiyey ka Da’een GobolkaNext PostMadaxweyne Ku xigeenka Somaliland Oo Tababar u soo xidhay 365 Askari oo Boolis ah	Blog